Dailybọchị: inghaghachite Akụkọ Dijitalụ | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 3, 2011 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Maka ebumnuche nke blọọgụ a, m gara wee nweta iPad ọhụrụ. Ama m, ama m… ọ bụ ezigbo ihe ngọpụ. Ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị na-ajụ ajụjụ gbasara iPad, agbanyeghị, yabụ, oge eruola ka igwu ala ma nwee di na nwunye maka ọrụ.
Ozugbo m laruru ụlọ, ana m ebudata ya .Bọchị niile, Rupert Murdoch's dijitalụ ozi ọma n'elu ikpo okwu haziri kpọmkwem maka iPad (mara ọkwa ụnyaahụ). Ahụmahụ ahụ pụrụ iche ma bụrụkwa ihe ịtụnanya. Dị ka onye ochie akwụkwọ akụkọ, naanị ihe m na-atụ uche bụ isi nke akwụkwọ akụkọ.
Njirimara ndị a bụ ngwakọ nke akụkọ abụọ, vidiyo na ntanetị - yana leverage nke mmekọrịta mmekọrịta nke mbadamba nkume n'ụzọ zuru ezu. Imirikiti eserese ndị dị na mbipụta ahụ nwere mmekọrịta, yana vidiyo na mgbasa ozi ejiri nlezianya jikọọ. Kama ịbụ onye obtrusive, mgbasa ozi ndị ahụ bụ nanị akụkụ nke ahụmịhe ka ị na-efere n'etiti ngalaba na ibe. Ogo nke mgbasa ozi ahụ na-ewepụ ihe mgbochi niile nke mgbasa ozi ọkọlọtọ.
Hasbọchị a nwere omimi na ogo nke akwụkwọ akụkọ mana a na-anapụta ya kwa ụbọchị dịka akwụkwọ akụkọ ma emelite ya ozugbo dị ka webụ. Akụkọ ndị dị egwu, foto, vidiyo, ọdịyo na eserese na-adị ndụ karịa ka ị metụrụ aka, swipe, pịa ma chọpụta. Egwuregwu egwuregwu a haziri ahazi na-enye gị ohere ịgbaso akara ọtụtụ, eserese na akụkọ ọkacha mmasị gị - ọbụlagodi tweets ndị egwuregwu.
Ihe Daily na-emezu bụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ahaziri iche. Anyị na-eme ka ọtụtụ ndị ahịa anyị mee karịa karịa naanị na-eme ka saịtị ha na-arụ ọrụ na mkpanaka na mbadamba nkume. Iji mejuputa ngwaọrụ ndị a n'ụzọ zuru ezu, ịchọkwu amamihe… ijikọ pagination, swiping, video, yana mmekọrịta ndị ọzọ. Ọ na-achọ onye na-emepụta weebụ nke ghọtara usoro ikpo okwu nke ọma yana onye ọrụ. (Ee, anyị maara na anyị emebeghị ya ebe ahụ na blọọgụ anyị… anyị na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ya).
Nke a dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ma na-ada ókè nke ndị na-ajụ ase anyị megoro n'oge gara aga. A na-agụ weebụ dị mfe ịkpọ oku-ka-Action (CTA) na peeji nke ọdịda na ụbọchị ntụgharị. Anyị ga-agwụcha ndị ọrụ ndidi site na nkwụsị na omume a tụrụ anya ya. Ngwaọrụ ndị a na-eme ka ahụmịhe pụrụ iche na-enweghị ike ịkọwapụta… naanị anyị chọrọ ụfọdụ ngwaọrụ ịchụkwudo!
Daily dị site na ọrụ ndenye aha iTunes nke Apple yana site na Applọ Ahịa iPad maka $ 0.99 kwa izu ma ọ bụ $ 39.99 kwa afọ. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na m ga-edebanye aha ozugbo ikpe m gachara!
Tags: akụkọ ipadNewsrupert murdochụbọchịakụkọ kwa ụbọchị
Feb 3, 2011 na 8:26 PM
Doug, ị dere, sị: “Dị ka nwoke ochie nke akwụkwọ akụkọ, naanị ihe na-agụ m bụ m, isi ísì ụtọ nke akwụkwọ ọhụụ.” Ebe ọ bụ na Indy Star na-eji ink soy, ọ ga-esi ísì ụtọ nri ọhụrụ?
Feb 8, 2011 na 1:38 PM
Dị ka a tech Ihọd m m gbara dị nnọọ banyere ihe niile electronically, ma m onwe m ka hụrụ a mma ebipụta akwụkwọ akụkọ. Na mgbakwunye, na isi, m ga-agbakwunye ndepụta nke atụmatụ dị iche bụ mmetụta akwụkwọ n'etiti mkpịsị aka gị ka ị na-atụgharị peeji.
Feb 8, 2011 na 9:10 PM
Hụ interface ahụ n'anya, mana akwụkwọ akụkọ na-ahapụ ihe dị ukwuu ịchọrọ. Lelee nzaghachi App Store nke Daily na-anata. Ekwesịrị m ikwu, ekwenyere m na ha.